I-Luxury 2-house villa ene-pool, ibhafu eshushu kunye ne-sauna
Ipropathi entle enezindlu ezi-2, igadi enkulu, iphuli, ibhafu eshushu, isauna kunye nazo zonke izinto ozidingayo ukuze uzonwabele. Nokuba ufuna ukuphumla nosapho okanye itheko nabahlobo, apha uya kufumana yonke into oyifunayo.
Ukuba ungathanda ukubhukisha enye kuphela kwezi zindlu zimbini, ungakhetha ukuba yeyiphi apha:
Indawo iyamangalisa nje. Yakhelwe ngo-2006, inazo zonke izibonelelo oya kuzifuna ukuze ube nokuhlala kamnandi nabahlobo okanye usapho. Unokucwina echibini nge-cocktail ecaleni kwakho, ubethe i-sauna emva kokuhamba kakuhle ezintabeni, kwaye wabelane ngamabali ambalwa ebusuku kwi-tub eshushu.
I-Kyulevcha ikwithambeka elisezantsi kwamatye ayinxalenye yeProvadia Plateau. Kwilitye elifanayo lelinye lawona manqaku makhulu eBulgaria - iMadara Horseman. Ngokuxhomekeke kwimillennia yokhukuliseko, amatye e-limestone afumene iimilo ezingaqhelekanga ezenza umbono ongakholelekiyo.
Le lali inembali edlamkileyo, inkcubeko, izityalo nezilwanyana. Namhlanje yenziwe ikakhulu zizindlu zeendwendwe ezizele ziindwendwe zasekhaya nezamazwe ngamazwe ezifuna ukubaleka okanye zifuna ukwazi ngendalo yaseBulgaria.
Owona mkhosi uphambili ngumamazala wam, uKameliya Raycheva. Iya kuba nguye oza kukwamkela ekufikeni kwakho emva koko abe sele esendleleni. Uhlala eShumen ekufutshane kwaye uhlala efumaneka kwi-intanethi okanye kwiselula kwaye nangayiphi na imeko unokuba seKyulevcha ngemizuzu engama-30. Ukuba ufuna uncedo ngayo nantoni na vele uqhagamshelane!
Owona mkhosi uphambili ngumamazala wam, uKameliya Raycheva. Iya kuba nguye oza kukwamkela ekufikeni kwakho emva koko abe sele esendleleni. Uhlala eShumen ekufutshane kwaye uhlala e…